Hoy ny fanadihadiana nataon'ny haino aman-jery sosialy: miakatra ny tompona | Martech Zone
Zoma, Aogositra 19, 2011 Talata, Oktobra 4, 2011 Lorraine Ball
Araka ny Fanadihadiana momba ny haino aman-jery sosialy tamin'ny taona 2011, ny tompona orinasa dia mihevitra ny haino aman-jery sosialy ho zava-dehibe kokoa noho ny tamin'ny lasa. Tamin'ny fanadihadiana natao ny 1 Mey 2011 - 1 Jolay 2011 dia nanontaniantsika ireo tompon'orinasa kely miisa 243 (orinasa manana mpiasa latsaky ny 50) izay namorona atiny ho an'ny kaontiny media sosialy.
Tomponandraikitra mandray andraikitra
Raha ny valintenin'izy ireo dia miharihary fa mandray am-pahamatorana ny media sosialy ny tompony satria maherin'ny 65% ​​no nilaza fa mandray anjara mavitrika amin'ny famoronana atiny. Ity isan-jato ity dia naharitra teo amin'ireo vondrona tompona orinasa kely, mandra-pijerinay ireo orinasa misy mpiasa 25 mahery.
Na manomboka manomboka aza ny fandraisan'anjaran'izy ireo dia mbola tafiditra ao ihany ny 50% amin'ireo tompona orinasa lehibe ireo. Mazava ho azy anefa fa ireo mpitantana ireo dia manankina andraikitra bebe kokoa amin'ny famoronana votoaty media sosialy amin'ny hafa.
Iza no tompon'ny famoronana votoaty media sosialy
Raha orinasa marobe misitrika anaty media sosialy, tsy mahomby ny fandaharan'izy ireo satria tsy mamaritra mazava ny anjara asany. Tsy manapa-kevitra izy ireo hoe iza no hamorona atiny, impiry ary momba inona.
Diso fanantenana aho nahita mihoatra ny ½ ireo orinasa ao amin'ny fandinihana dia tsy manararaotra ny mpanjifa sy ny vinavina ho mpamorona atiny.
Manomboka amin'ny fijoroana vavolombelona sy fizahana, ka hatramin'ny FAQ ary fifanakalozan-kevitra, dia very fotoana lehibe tokoa ny orinasa amin'ny tsy fandraisany anjara mavitrika amin'ireo faritany ireo.
Tsy ny Intern
Na dia miovaova arakaraka ny orinasa aza dia misy mariky ny fanamafisana ny haino aman-jery sosialy amin'ny taona 2011. Ohatra: Diniho ny andraikitry ny mpampiofana. Tao amin'ny fandinihana Facebook tamin'ny taona 2010, maherin'ny 80% amin'ireo orinasa manana mpiasan'ny mpiasa no nilaza fa voarohirohy tamin'ny famoronana atiny media sosialy.
Aminay, nanondro ny zava-misy ireo orinasa fa tsy tena nandray ny fitaovana tamim-pahamatorana. Raha nanana izy ireo dia tsy hiankina amin'ny mpikambana kely za-draharaha ao amin'ny ekipany hitarika ny fampandrosoana ny atiny. Tamin'ny fandalinana tamin'ity taona ity, 30% monja amin'ireo orinasa manana mpampiofana no nilaza fa nandray anjara tamin'ny famoronana atiny.
Na dia maro aza ireo tompona orinasa mino fa ny haino aman-jery sosialy dia karazana hetsika fanaovan-tena, misy ny fitomboan'ny fahalianana amin'ny fandraisana mpiasa ara-barotra sy haino aman-jery sosialy hanohanana ny ezak'izy ireo. Amin'ny ankapobeny, manodidina ny 10% amin'ireo orinasa amin'ny fanadihadiana no nilaza fa misy orinasa ivelany miasa mavitrika amin'ny programa media sosialy an'ny orinasa. Raha nanantena aho ny orinasa lehibe hitady fanampiana any ivelany, orinasa marobe ao amin'ny sokajy olona 6-10 koa no mitady loharano ivelany.
Ny nahagaga, ireo orinasa misy mpiasa 11 - 24 dia tsy dia nanararaotra nampiasa orinasa ivelany. Nahoana? Heverinay amin'ity habe ity, ny orinasa dia manana olona manana mpiasa hanokana fotoana amin'ny hetsika media sosialy. Araka ny efa nampoizina, ny lehibe indrindra amin'ireo orinasa ireo dia toa manana mpiasa manokana amin'ny tambajotra sosialy. Ireo fanehoan-kevitra dia mampiseho ihany koa ny fifanolanana misy eo amin'ireo toby fanaovana-azy-tenanao sy ireo manakarama mpanohana.
Inona no lazain'ny tompona orinasa momba ny fahazoana fanampiana amin'ny media sosialy?
Manakarama olona hanangana kaonty ary hampianatra anao ny fomba fitantanana azy ireo amin'ny fomba mahomby. Sarotra ny manaraka azy rehetra amin'ny fomba mety.
Manaova profesora iray ataovy ny Media sosialy. Manofa CPA ianao satria tsy afaka manao kaonty, manakarama matihanina amin'ny media sosialy.
Androany ny tsirairay dia "manam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialy" fantatrao toa azy ireo.
Manakarama olona afaka manabe anao, manangana fitaovana media sosialy ary mihazakazaka mifanaraka amin'ny marikao.
Raiso am-po ny haino aman-jery sosialy fa miezaha ho "manam-pahaizana" sy mpanolo-tsaina amin'ny media sosialy.
Te hanana kopian'ny valin'ny fanadihadiana feno ve ianao? Afaka misintona avy amin'ny Roundpeg, orinasan-tserasera sosialy Indianapolis.